.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: အောင်ဝင်းထွန်း၏ FlashSong များ
အောင်ဝင်းထွန်း၏ FlashSong များ
(အမှတ်တရအနမ်း(ဇေရဲ) (A Mone PhweTay) (မေတ္တာပို့တေး) (အချစ်တွက်ကံမကောင်းတဲ့)
(အိမ်မက်ထဲကကောင်မလေး) (အိမ်မက်ကမ္ဘာ) (မုန်းဖို့လွယ်တယ် မေ့ဖို့ခက်တယ်) ( ဘယ်ကိုသွားမလဲ)
(ပြဇာတ်မဟုတ်သောပြဇာတ်) (အလွမ်းပြေအနမ်း) (အဖွင့်အမှာစကား) (တိမ်တွေနေတဲ့အရပ် )
(ချစ်သူရဲ့ပုံပြင်) (မေ့လို့မရလို့ပါချစ်သူ) (မင်းလေးသိဖို့) (ဒီကောင်မလေးအတွက်)
(တိုင်တန်းနစ်သီချင်း) (ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ) (D.J music) (ငါဝအောင်ငိုလိုက်မယ်)
(ဒီဇင်ဘာည(လင်းနစ်) (ဒွိဟ(Bobby Soxer) (ကျောခိုင်းလိုက်ပြီး) ( အရင်ကဇာတ်လမ်း)
(God send rain) (ဟုတ်လို့လာဟုတ်ရဲ့လာ) (I HatethisPart) ( ကာရံမယ့်အချစ်)
(vers. DJ Daniel Medrado)2013 (လိုက်ဖက်တဲ့ဘဝ) (လမ်းမကြီးရဲ့ဘေ) ( လက်တွေတွဲထားမယ်)
(မျှော်လင့်နေ၇တဲ့အချစ်) (မငြိုငြိင်ရက်ဘူး ) (I Miss You)Wai lin (မှားပြီးနော်)
မိုနိုပိုလီ) (မင်း) (မိုးပြေး) (my Home Paradise)
(myanmar new fallinlove) (အမြန်ပြန်လာခဲ့ပါ) (မင်းနဲ့ဝေးရာ) (နင်မရှိရင်)
(နင်သာရှိရင်) (နောက်ဆုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်း) (နိုဝင်ဘာမိုး) (ဖိုးကား)လမ်းခွဲ
(အောင်လ)ပြော (နွယ်နီ) (ပြိုလဲကြေကွဲ) (လွဲနေတဲ့ဆုံမှတ်များ)
(RainStory) (ရက်စက်မှကြေကွဲ) (အမုန်းသမား) (ဦးဘညွန့်ချစ်ဒုက္ခ)
(ကိုကိုလူဆိုး) (D,J)right (Enchanted- Taylor Swift) Flash Song Name
(Ice.Ice.Baby.Vanilla_Ice) (Lady_Gaga_) (Indonesia music) (အပြစ်မမြင်ပါဘူး)
(အလွမ်းသက်သေ) (တစ်ခါတည်းချစ်ချင်လို့) (သန့်ရှင်းတဲ့ခရစ္စမတ်) (သံစဉ်မဲ့သီချင်း)
(သစ္စာ) (ဝေပြီးတဲ့နောက်) (ရပါတယ်ထွက်သွားပါ) (ရာဇ၀င်တွင်မယ့်အချစ်)
(အသည်းကွဲတဲ့ရောဂါ) (ရှုပ်ထွေးခြင်း) (ငါရိုနေပါပြီး) (ပုံပြင်တစ်ပုဒ်၏နိဂုံ)
(ပြည့်စုံလွန်) (အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်) (နှစ်ယောက်မ၇ှိဘူး) (နင်ပြန်လာမယ့်အချိန်)
(အရင်လို)သားသား (အိမ်မက်ကမ္ဘာ) (ချစ်သူ့အနား) (D.J)
(Don't Worried for me) (မိန်ကလေးအချစ်) (ရင်ထဲက)English song) (အကြွေမဲ့)
(ကြွေပါစေ) (နှလုံးသွေးများ) (အဖြူရောင်အချစ်) (မဝေးဘူး)
(Dounle nyi nyi) (မင်းကိုသတိရရင်) (မင်းပဲရှိတယ်) (မိုးစက်လေးတွေရဲ့သက်သေ)
(I love You) (myanmar valentine) (နှလုံးသားအရင်းအနှီး)၁ (နှလုံးသားအရင်းအနှီး)၂
(ရီးစားစာ) (စိတ်ကူးနဲ့ပဲ) အချစ်များစွာယူ သူသိပါကွယ်
ငါ့အတွက်အိပ်စက်ခြင်း တကယ်ပုံပြင် (နိဒါန်း) ကလေးရယ်(ဝေလင်း)
ဝန်ခံပါ(ပူစူး) ငါ့ရဲ့မိန်ကလေး ကြိုနေစေချင်တယ် takeachance on me (ဘန်နီဖြိုး)
မဆိုင်တော့ဘူး(စန္ဒီ) ဖက်တီးမ(ဆိုတေး) ဘာကြောင့်ငါမဟုတ်ရတာလဲ တောဂေါ်လီ
Facebook story You Belong With Me လမိုက်ည(ရိန်မိုး) (သင်္ကြန်အိမ်မက်)
flashsongs is created by aungwintunflashsongs.blogspot.com